မက်ဆီဟာ လာလီဂါရာသီအဖွင့်မှာပဲ သမိုင်းဝင်စံချိန်မှတ်တမ်းတွေ ရယူနိုင်ခဲ့ပြန်ပြီ
စံချိန်မှတ်တမ်းတွေဆိုတာက မက်ဆီ Messi အတွက် သတ်မှတ်ပေးထားတာလား
20 Aug 2018 . 1:50 PM
ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ အာဂျင်တီးနား နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှူး မက်ဆီ Messi ရဲ့ တစ်ဦးချင်း စံချိန်မှတ်တမ်းတွေက မရပ်တန့်တော့ဘူးလား။ သူ့ရဲ့ Individual Records နဲ့ Awards တွေကို ချရေးရင် ဆောင်းပါးရှည် တစ်ပုဒ်တောင် ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ စံချိန်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရယူနေတာတောင် မက်ဆီအတွက် စံချိန်မှတ်တမ်းတွေက အခုထိ မဆုံးသေးဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က အလာဗတ်စ်ကို (၃)ဂိုးပြတ်နိုင်တဲ့ လာလီဂါရာသီသစ် အဖွင့်ပွဲမှာ မက်ဆီဟာ ဘာစီလိုနာအတွက် (၂)ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး သမိုင်းဝင်မယ့် စံချိန်မှတ်တမ်းတွေ ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။
မက်ဆီဟာ (၆၄)မိနစ်မှာ ထုံးစံအတိုင်း Tricky Free kick ဖြစ်တဲ့ ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေရဲ့ ခြေထောက်အောက်ကနေ ကန်သွင်းခဲ့ပြီး အဲဒီဂိုးဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် လာလီဂါဂိုး(၆၀၀၀)ပြည့်အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ အရင် လာလီဂါ ဂိုး(၅၀၀၀)ပြည့်တုန်းကလည်း မက်ဆီပဲ သွင်းခဲ့တာပါ။ နောက်ထပ် ထူးခြားတာက ဘာစီလိုနာအသင်း လာလီဂါသွင်းဂိုး(၆၀၀၀)မှာ မက်ဆီ တစ်ဦးတည်းက (၃၈၄)ဂိုးအထိ သွင်းခဲ့တာကြောင့် သွင်းဂိုးအားလုံးရဲ့(၆.၄)ရာခိုင်နှုန်းကို သွင်းယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဆီရဲ့ စံချိန်က ဒီတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ လာလီဂါ သမိုင်းတစ်လျှောက် (၁၅)ရာသီဆက် ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ကစားသမားအဖြစ်လည်း စံချိန်စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ၂၀၀၄-၀၅ ရာသီကတည်းက ဘာစီလိုနာ စီနီယာအသင်းအတွက် ပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ မက်ဆီဟာ အဲဒီအချိန်ကတည်းက စလို့ လာလီဂါမှာ တောက်လျှောက် ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး ၂၀၁၁-၁၂ ရာသီတုန်းကဆိုရင် ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် အမြင့်ဆုံးအဖြစ် တစ်ရာသီထဲမှာ ဂိုး(၅၀)အထိ သွင်းယူခဲ့တယ်။
ဒီရာသီ လာလီဂါမှာ အဓိက ပြိုင်ဘက် စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo မရှိတော့လို့ မက်ဆီအတွက် ပြိုင်ဘက်ကင်းသွားပြီလို့ မီဒီယာတွေက သုံးသပ်နေကြပေမယ့် မက်ဆီလို Gifted Player တစ်ဦးဆိုတာက စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဖို့၊ ပြိုင်ဘက်ကောင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရဖို့ အမြဲမျှော်လင့်နေသူပါပဲ။ ဒီရာသီမှာလည်း မက်ဆီ နောက်ထပ် ဘယ်လိုစံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတွေ ဆက်ပြီးရယူသွားမလဲဆိုတာ . . .
ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက် လာလီဂါသမိုင်းတစ်လျှောက် မှတ်တမ်းဝင်သွင်းဂိုးပိုင်ရှင်များ
စံခြိနျမှတျတမျးတှဆေိုတာက မကျဆီ Messi အတှကျ သတျမှတျပေးထားတာလား
ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ အာဂငျြတီးနား နာမညျကြျောတိုကျစဈမှူး မကျဆီ Messi ရဲ့ တဈဦးခငျြး စံခြိနျမှတျတမျးတှကေ မရပျတနျ့တော့ဘူးလား။ သူ့ရဲ့ Individual Records နဲ့ Awards တှကေို ခရြေးရငျ ဆောငျးပါးရှညျ တဈပုဒျတောငျ ဖွဈသှားလိမျ့မယျ။ စံခြိနျတှေ တဈခုပွီးတဈခု ရယူနတောတောငျ မကျဆီအတှကျ စံခြိနျမှတျတမျးတှကေ အခုထိ မဆုံးသေးဘူး။ ပွီးခဲ့တဲ့စနနေကေ့ အလာဗတျဈကို (၃)ဂိုးပွတျနိုငျတဲ့ လာလီဂါရာသီသဈ အဖှငျ့ပှဲမှာ မကျဆီဟာ ဘာစီလိုနာအတှကျ (၂)ဂိုးသှငျးယူခဲ့ပွီး သမိုငျးဝငျမယျ့ စံခြိနျမှတျတမျးတှေ ရယူနိုငျခဲ့တယျ။
မကျဆီဟာ (၆၄)မိနဈမှာ ထုံးစံအတိုငျး Tricky Free kick ဖွဈတဲ့ ပွိုငျဘကျကစားသမားတှရေဲ့ ခွထေောကျအောကျကနေ ကနျသှငျးခဲ့ပွီး အဲဒီဂိုးဟာ ဘာစီလိုနာအသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ လာလီဂါဂိုး(၆၀၀၀)ပွညျ့အဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့တယျ။ အရငျ လာလီဂါ ဂိုး(၅၀၀၀)ပွညျ့တုနျးကလညျး မကျဆီပဲ သှငျးခဲ့တာပါ။ နောကျထပျ ထူးခွားတာက ဘာစီလိုနာအသငျး လာလီဂါသှငျးဂိုး(၆၀၀၀)မှာ မကျဆီ တဈဦးတညျးက (၃၈၄)ဂိုးအထိ သှငျးခဲ့တာကွောငျ့ သှငျးဂိုးအားလုံးရဲ့(၆.၄)ရာခိုငျနှုနျးကို သှငျးယူခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။ မကျဆီရဲ့ စံခြိနျက ဒီတဈခုတညျး မဟုတျပါဘူး။ လာလီဂါ သမိုငျးတဈလြှောကျ (၁၅)ရာသီဆကျ ဂိုးသှငျးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ကစားသမားအဖွဈလညျး စံခြိနျစိုကျထူနိုငျခဲ့ပါသေးတယျ။ ၂၀၀၄-၀၅ ရာသီကတညျးက ဘာစီလိုနာ စီနီယာအသငျးအတှကျ ပှဲထှကျခှငျ့ရခဲ့တဲ့ မကျဆီဟာ အဲဒီအခြိနျကတညျးက စလို့ လာလီဂါမှာ တောကျလြှောကျ ဂိုးသှငျးခဲ့ပွီး ၂၀၁၁-၁၂ ရာသီတုနျးကဆိုရငျ ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ အမွငျ့ဆုံးအဖွဈ တဈရာသီထဲမှာ ဂိုး(၅၀)အထိ သှငျးယူခဲ့တယျ။
ဒီရာသီ လာလီဂါမှာ အဓိက ပွိုငျဘကျ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo မရှိတော့လို့ မကျဆီအတှကျ ပွိုငျဘကျကငျးသှားပွီလို့ မီဒီယာတှကေ သုံးသပျနကွေပမေယျ့ မကျဆီလို Gifted Player တဈဦးဆိုတာက စိနျချေါမှုတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရဖို့၊ ပွိုငျဘကျကောငျးနဲ့ ယှဉျပွိုငျခှငျ့ရဖို့ အမွဲမြှျောလငျ့နသေူပါပဲ။ ဒီရာသီမှာလညျး မကျဆီ နောကျထပျ ဘယျလိုစံခြိနျမှတျတမျးကောငျးတှေ ဆကျပွီးရယူသှားမလဲဆိုတာ . . .
ဘာစီလိုနာအသငျးအတှကျ လာလီဂါသမိုငျးတဈလြှောကျ မှတျတမျးဝငျသှငျးဂိုးပိုငျရှငျမြား